Services Franchise Kutengesa | Mukana weFrancise | Franchiseek
Franchiseek»Mukana weFrancise»United Kingdom»Services Franchise
New Services Franchises
Bridgewater Home Care franchise inokupa iwe mukana wekuvaka rako rakabudirira bhizinesi kukurumidza kukurumidza, zvachose ...
Pfupiso Zedify ndiyo zero-emission solution yekutanga uye yekupedzisira mamaira kuburitsa mumaguta. Isu tinopa mabhizinesi nebasa ...
Kubatsira vanochengeta mutemo kugadzirisa budiriro yezvivakwa inishuwarenzi Isu tiri kambani-yekuhwina kambani iyo inobatsira varidzi vemitemo kuita budiriro yezvivakwa ..
Iko kudikanwa kwemabasa ehunyanzvi epasi rese hakuna kumbove kwakakwira. Saka neindasitiri iri kuwedzera iwe unogona kunge uchifunga nezvekutenga masevhisi ane hukama nemukana.
Ndedzipi mhando dzemasevhisi franchise aripo?
Isu tine akasiyana-siyana akasiyana mabasa emunhu franchise anowanikwa kuFranciseek anosanganisira kuchenesa mafurati, chengetedzo yemafurati, dzimba dzekuvandudza mafurati uye zvimwe zvakawanda. Saka isu tichakurumidza kunyora dzimwe nhamba dzakatenderedza maindasitiri aya kuti akupe iwe pfupi nzwisiso yekukura kwavo.
Kuchenesa Indasitiri: Iyi indasitiri yekuchenesa yave iri kuwedzera nekukurumidza muchikamu chevashandi vega kwemakore mazhinji ikozvino munyika zhinji. Zvakare mumakore apfuura UK semuenzaniso yakaona kuwedzera kwakasimba kwazvo kwemasevhisi akadai seaya.
Kubva 2010 chikamu chekuchenesa chaona kuwedzera kwe21% kuburitswa muUK chete.
Kune anopfuura 23,000 emabhizinesi muUK achipa zvekuchenesa kuvaka sekunatswa kwemahofisi nezvimwe.
Iyo yakakura chikamu chemusika saizi muUK yakakosha madhiri mabhiriyoni matanhatu eBritain.
Care Indasitiri: Nehupenyu hwekutarisira hunowedzera nekuda kwechishamiso chetekinoroji dzazvino uno zvingaite sezvakanaka chinhu. Asi izvi zvakare zvinoreva kuti vanhu vakura vachazoda rubatsiro rwakanyanya uye nehanya ichi ndicho chikonzero indasitiri yekutarisira yawanda zvakanyanya.
Iyo indasitiri yekutarisira inounza mubhadharo we7.8 bhiriyoni kuupfumi hweUK gore rega
Iyo Hofisi yeNational Statistics inofungidzira kukura kwe makumi matatu neshanu muvanhu vane makore 36+ pakati pegore ra85 na2015, kubva pamamiriyoni 2025 kusvika pamamirioni maviri.
Muna 2018 vanopfuura mamirioni manomwe vanhu mavakashandira muindasitiri yekutarisira muUS chete
Home Kuvandudza Indasitiri: Isu tese tinoziva tinoda dzimba dzedu kuti dziratidzike dzakakwana ndosaka tichishandisa nguva uye zvakare mari pakuchenesa uye fenicha nyowani kuita kuti iite seyakanakisa asi waizviziva here?
maringe neNAEA takashandisa mari inodarika mabhiriyoni makumi mana nemana emadhora pakugadzirisa dzimba mumakore mashanu apfuura muUK.
$ 394B. zvese kumba kunatsiridza kutengesa muUS muna 2018.
$ 680B. fungidziro mari yeiyo DIY kumba kunatsiridza musika muna 2025.
Izvi zvinoratidzei nezve chikamu chebasa?
Sezvo iwe waona kubva stats idzi dzose idzi mabasa uye kurapwa zvese zvinopa chikamu chepasi rose sevashandi. Saka sezvaungaona kubva kumabhizinesi ese aya anobatsira pasi rose masevhisi arikukura zvakanyanya izvo zvinoratidza iri mukana wakanaka uye indasitiri inonakidza yekubatana. Saka iwe wakamirira chii? Tarisa mamwe emasevhisi edu ekushandira kuFranchiseek nhasi kuti uwane mukana wako wekurota.